Annaga nagu saabsan - Ares Dabaqa Nidaamka
Nidaamyada Dabaqa Aeas
Ares Floor Systems waa mid si degdeg ah u fidaya
shirkad tignoolajiyadeed oo soo saarta oo horumarisa alaabada wax lagu farsameeyo oogada.
Warshadu waxay dabooshaa: Furimaha Dagaalka, nadiifiyaha faakuumka warshadaha, nadiifiyaha sagxada, gaadhi xaaqaya, agabka iyo alaabta iyo 11 kale oo taxane ah oo ku dhaw 100 alaab. Maanta, Ares Floor Systems waa hormuudka suuqa caalamiga ah ee nidaamyada sagxadda oo ku salaysan Furimaha Dagaalka dabaqa, oo leh dhowr xalal farsamo oo dhowr patent-ilaaliye ah oo suuqa ka jira. Ares Floor Systems waxa ay leedahay in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah oo la isku daray oo ku saabsan warshadaha la taaban karo oo ay bixiso adeeg macmiil oo aan la mid ahayn. Waxaan u heellannay adeegsiga AIOT, xisaabinta daruuraha, xogta weyn iyo teknoolojiyadda kale, taas oo ah shirkad cusub oo teknoolojiyad sare ah oo ku hawlan cilmi baarista, naqshadeynta iyo soo saarista mashiinnada sagxadda iyo xallinta nidaamka dhulka. Waxaan nahay doorashada si ay u sameeyaan xirfadlayaasha la taaban karo!
Adeegga heerka sare ah iyo suuqa ugu wanaagsan uguna halabuursan, xalal dhamaystiran, waxaan siinaa macaamiisheena aduunka dacaladeeda hab fudud, deegaan saaxiibtinimo iyo faa'iido leh si ay u fuliyaan hawl maalmeedkooda.
Sheekada Ares Floor Systems
Ares Floor Systems waa awood leh, miisaan hogaaminaysa nidaamyada dhulka ka baaraandegidda qalabka cilmi baarista iyo horumarinta, shirkadaha wax soo saarka. Ares Floor Systems waxaa la guddoonsiiyay cinwaannada sharafta leh ee shirkadda Shanghai High-tech Enterprise iyo Sayniska iyo Teknolojiyadda Gobolka Jiangsu. Isla mar ahaantaana, tiro ka mid ah teknoolajiyada ayaa helay shatiyada ikhtiraacida, moodooyinka utility, design, ilaalinta software-ka, ganacsiga iyo alaabooyin kala duwan iyada oo loo marayo CE, SGS, ISO iyo shahaado kale oo caalami ah iyo mid gudaha ah. Waxaan samaynay nidaam adeeg oo kaamil ah oo leh ku dhawaad ​​23,000 oo shuraako ah gudaha Shiinaha. Goobaha adeegga calaamadaynta ayaa daboolay in ka badan 100 magaalo oo dalka oo dhan ah. Isla mar ahaantaana, alaabtayada waxaa loo dhoofiyaa 138 waddan iyo gobollada Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo wixii la mid ah.
1. Hogaamiye, adeeg bixiye buuxa
Kooxaha asaasiga ah ee Ares Floor Systems waa xirfado sare oo leh in ka badan toban sano oo waayo-aragnimo shaqo ah hababka daaweynta dhulka iyo codsiyada. Waxaan leenahay waayo-aragnimo qani ah xagga cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, kontoroolka tayada, maamulka silsiladda sahayda, maaraynta alaabta iyo adeegga macaamiisha ee Furimaha Dagaalka, nadiifiyaha vacuum warshadaha, iyo baabuurta xaaqin.
2. Kobcinta badeecada uu macaamiishu wado
Ares Floor Systems waxa ay horseedday horumarinta warshadaha shiididda sagxadda in ka badan 10 sano oo tobanaan sano ah iyada oo u ah lammaane firfircoon oo ka jawaaba qandaraaslayaasha adduunka oo dhan. Istaraatiijiyadu waxay ahayd in si firfircoon loo qabsado baahiyaha isticmaaleyaasha, qandaraaslayaasha, shirkadaha kiraynta, naqshadeeyayaasha iyo kuwa kale ee ku dadaalaya inay hormuud ka noqdaan horumarka - iyo inay u beddelaan caqabadahooda maalinlaha ah fursado cusub.
3. Xirfado isuduwid oo xooggan
Awooda Ares Floor Systems waxay ku dhex jirtaa is-dhexgalka cad ee u dhexeeya mishiinada, agabka, agabka iyo aqoonta aanu bixino. Mid kasta oo ka mid ah makiinadaha dhulka, nadiifiyaha faakuumka warshadaha, baabuurta xaaqida iyo hababka ayaa ka mid ah kuwa ugu wanaagsan warshadaha. Si wada jir ah waxay u sameeyaan xalalka abuura faa'iidooyinka ganacsi ee ugu sarreeya iyo natiijooyinka ugu wanaagsan.
4. Waayo-aragnimada macaamiisha heer sare ah
Ares Floor Systems waxay leedahay wakiillo aqoon sare leh oo khibrad leh kuwaas oo aqoon ballaaran u leh qalabkayaga iyo codsiyadayada. Iimayl:order@aresfloorsystems.com
Mashiin wax shiida flat, Furimaha Dagaalka Dabaqa, Mashiinka Waxshiidka Xawaaraha Sare, Soo saarista Kuraasta Baabuurka, Baabuurka shaambada faaruqinta, Mishiinka Shiida Geedaha,